I-English Grammar Online »IHodges University - Admissions
Categories: I-English Grammar, Ulimi lwesingisi, IHodges Connect, Isiqondisi Esiku-inthanethi, Imfundo Ephakeme Nokuqeqesha
Khula Ngezifundo Ze-Grammar ZesiNgisi Eziku-inthanethi Ezivela EHodges Connect!
Uyemukelwa kuhlelo lwe-English English Grammar lweHodges University, uhlelo olulandelanayo lokuqonda amaphethini ohlelo lolimi lwesiNgisi kusuka kumazinga ayisisekelo kuya kwamakhono aphezulu. Uhlelo lwethu oluzihambela ngokwalo ku-inthanethi lwenzelwe ngokukhethekile izikhulumi zabantu abadala ezingezona isiNgisi ukuze ziqonde uhlelo lolimi futhi zikhulume isiNgisi ngokuzethemba. Thola amakhono owadingayo kumabizo, izenzo, izigaba, nezichasiso. Lawa makhono angakusiza ukuthi wandise ikhono lakho lokusebenzisa isiNgisi ngempumelelo nangezinhloso futhi / noma wandise amathuba wokwenza imali!
Lezi zifundo zenzelwe abantu abadinga ukuguquguquka ukuze bafunde ku-inthanethi, bakwazi ukufinyelela kwi-smartphone noma idivayisi yeselula, mhlawumbe banamahloni noma banamahloni okuxhumana ekilasini noma endaweni yokuxhumana nabantu, futhi / noma bafuna isifundo sesiNgisi esenzelwe ukuletha izifundo ezisezingeni eliphakeme online zesiNgisi ku intengo engabizi. Qala i-Online English Grammar Course namuhla!
Le nkambo yokufuna okungeyona eyidijithali enikezwa njengengxenye ye- IHodges Xhuma Uhlelo Lwezemfundo Nokuqeqesha, lapho sikuxhuma khona namakhono afunwa ngumqashi ukuze uphumelele.
Sesha Zonke Izifundo Zolimi lwesiNgisi
Sesha Izinhlelo Zokuxhuma zeHodges
Imininingwane eku-inthanethi ye-English Grammar Course
Qalisa ekuqaleni: Izifundo ze-English Grammar Online 1, 2, & 3
Qonda ukuthi ungabona kanjani futhi usebenzise amabizo, izabizwana, izindatshana, izichasiso, izinto, zombili izinkathi zamanje nesikhathi esidlule sika-Be. Funda ukuthi ungawusebenzisa kanjani imali, wenze imibuzo, futhi wenze inkontileka yokuthuthukisa ukuqonda nokukhuluma kahle.
Ukuqala: $ 299
IGrammar yesiNgisi 1
IGrammar yesiNgisi 2
IGrammar yesiNgisi 3
Bhalisela IsiNgisi Esiqalayo
Qhubeka Ngezinga Eliphakathi: Izifundo Ze-English Grammar Online 4, 5, & 6
Qonda ukuthi ungazikhomba futhi uzisebenzise kanjani izinkathi ezilula nezithuthukayo esikhathini samanje, esedlule, nesikhathi esizayo, uqhathanise nezicelo, futhi ufune futhi unikeze izeluleko nemvume. Funda ukuthi ungazihlanganisa kanjani imisho futhi usebenzise izenzi zomusho namafomu ahlanganisiwe ukuthuthukisa ukuqonda nokukhuluma ngokushelelayo.
Ephakathi: $ 299
IGrammar yesiNgisi 4
IGrammar yesiNgisi 5
IGrammar yesiNgisi 6
Bhalisela IsiNgisi Esiphakathi
Qeda ngezinga eliphakeme: Izifundo ze-English Grammar Online 7, 8, & 9
Qonda ukuthi ungazikhomba futhi uzisebenzise kanjani zonke izinkathi ezilula, eziphelele nezinenqubekela phambili, izichasiso nezigaba zamabizo, izwi elisebenza kanye nelokwenziwa, nezimo zokucabanga. Funda ukuthi ungasiveza kanjani isidingo, kungenzeka, amathuba, namathemba nezifiso kuzo zonke izinkathi nakwezinye izimo ezahlukahlukene. Ngokwengeziwe, funda ngesigqi nangephimbo lenkulumo yesiNgisi ukuthuthukisa ukuqonda nokukhuluma kahle.
Kuthuthukile: $ 299
IGrammar yesiNgisi 7
IGrammar yesiNgisi 8
IGrammar yesiNgisi 9
Bhalisela IsiNgisi Esithuthukile
Thatha Inkambo eku-inthanethi ekufundisa ukuthi ungasisebenzisa kanjani isiNgisi empilweni yangempela.
Finyelela kuzo zonke izifundo eziyi-9 usebenzisa noma iyiphi idivayisi yeselula.
Isifundo ngasinye siqukethe Ukufunda Okusebenzisana, Ukuhlolwa, Ukuzijwayeza Ukuphimisa, Namasu Okusetshenziswa.
Ukuhlolwa okungenamkhawulo kuthatha kabusha.
Izifundo ezifundiswe nguDkt Leisha Cali, uMqondisi we-ESL, onolwazi olungaphezulu kweminyaka engama-28 lokufundisa isiNgisi.
Ukuthengwa wonke amazinga angama-9 ohlelo lolimi lwesiNgisi ngo- $ 795 noma ukuthenga Ukuqala, okuPhakathi, kanye / noma Okuthuthukile ngama- $ 299 lilinye.
Musa Ukulinda, Qalisa Namuhla!
Bhalisela wonke amazinga we-Grammar yesiNgisi!
Okuningi NgoDkt Leisha Cali, Umqondisi we-ESL neHodges Online Program
UDkt Leisha Cali, uMqondisi we-ESL, ubelokhu eneHodges University kusukela ngo-2004. Uneminyaka engaphezu kwengama-28 yokuhlangenwe nakho futhi uhlanganisa ucwaningo lwakhe nolwazi olusebenzayo olwenziwe ekufundiseni abafundi isiNgisi njengoLimi Lwesibili kule minyaka engu-15 edlule ukuletha amasu okufunda ulimi lowo msebenzi.
Wenze izifundo ze-English English Grammar ezikhethekile ikakhulukazi kulabo abangakwazi ukuvakashela ikhampasi uqobo.
Ukuzihambela ezinye izinhlelo ezifinyeleleka nge-Canvas usebenzisa noma iyiphi idivayisi yeselula.
Izifundo zohlelo lolimi ezenzelwe ukukusiza qonda okushiwo yizwi elikhulunwayo nelibhaliwe.
Kukusiza khulisa amakhono akho ngaphezu kwesiNgisi sokusinda, okungavimbela ukuxhumana komuntu nomuntu, kanye namathuba wezezimali.
Ukuhlolwa kusuka kokukhetha okuningi ukugcwalisa futhi kungathathwa kaningi njengokuthandwa ngumfundi.
Funda silulumagama lesivama kakhulu kunokuba ube nolwazimagama olubanzi, okukuvumela ukuthi ukhulume kahle kakhulu.
Funda izindlela zokwakha ulwazimagama kumavidiyo wohlelo olusebenzayo esifundweni ngasinye.
Thola okuningi ngemali yakho ngezifundo ezigqamile, ukucindezeleka, isigqi, nomculo - izindawo ezivame ukunganakwa ezinhlelweni zendabuko neziku-inthanethi.
Ngamafuphi, uhlelo lweHodges University's English Grammar Online lwenzelwe ukuthi uqonde ukuthi uhlelo lolimi lusebenza kanjani futhi ufunde ukukhuluma ngokuzethemba!
Majani Lullein, Iphini Likamongameli i-Anchorage Productions Media
“Lolu hlelo lungisizile ngashintshela ezweni elikhuluma isiNgisi ngokuzethemba nangokunethezeka. Ngaphandle kwayo, bengingeke ngikwazi ukuqedela imfundo yami kuleli. ”